Tontosa ny 60% hatramin’ny 90%-n’ny asa: ho vita ny volana janoary ny Akademian’ny zavakanto | NewsMada
Fotodrafitrasa iray lehibe, hisy ny Akademia nasionalin’ny zavakanto sy ny kolontsaina na ny Anac no hatsangana etsy Ambohitsorohitra ambany. Miandry fatratra ny fahavitany ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina.
Goavana ! Izay no azo hanasokajiana ity fotodrafitrasa iray ity. Ireo izay mandalo eny Ambohitsorohitra ambany, manoloana ny farihin’Anosy dia mahatsikaritra avokoa ny fihazakazak’ilay tranobe hahorina eo. Ny Akademia nasionalin’ny zavakanto sy ny kolontsaina (Anac) io, izay tafiditra anatin’ny vina napetraky ny filoham-pirenena sy ny minisitera tompon’andraikitra amin’ny fampiroboroboana ny tontolon’ny kolontsaina marolafy.
Nisy ny fidinana ifotony, nataon’ny minisitry ny Serasra sy ny kolontsaina, Andriatongarivo lalatiana sy ireo mpiara-miasa aminy teny an-toerana, omaly. Fantatra tamin’izany fa manodidina ny 60% hatramin’ny 90% eo ho eo izao ny tontosa amin’ireo asa goavana. Mizara efatra mazava ny asa tontosaina ao ka anisan’izany ny toerana lehibe fanaovana fampisehoana, izay efa tontosa hatramin’ny 60%. Eo koa ny toerana hanaovana ny fampirantiana efa mananika ny 80 % ny asa. Ireo trano ho an’ny birao samihafa kosa dia efa mananika ny 90% ny fahavitany. Miandry farany kosa ny fanatsarana ny endrika ivelany sy ny manodidina ny trano iray manontolo.
“Raha tadidintsika, ny 15 novambra 2019 no nametrahantsika ny vato fototra voalohany teto, ary notombanana ho vita amin’ity faran’ny volana septambra 2020 ity ny asa rehetra. Noho ny zava-nisy anefa, nisy ny fahatarana ka vinavinain’ny orinasa miandraikitra ny fananganana ny Anac ho vita ny faran’ny volana janoary 2021 ny asa rehetra”, hoy ny nambaran’ny minisitra teny an-toerana.
Miezaka manenjika ny fahatarana amin’ny fahavitan’ny asa, araka izany, ny orinasa miandraikitra ny fananganana ny tranoben’ny Anac. Etsy an-kilany, nanambara koa ny minisitra fa efa eo am-panomanana ny rijantenin-dalàna mahakasika ity akademia ity ny eo anivon’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera. Tombanana ho efa miasa tsara sy hihodina, araka ny antom-pisiana ny akademia nasionalin’ny zavakanto sy ny kolontsaina, amin’ny telovolana voalohan’ny taona 2021.